Ahịa vidiyo: Ngosipụta mmekọrịta mmadụ na ọnụ ọgụgụ | Martech Zone
Taa, mụ na onye ahịa na-ezukọ ma na-ekwurịta ohere ha ga-eji merie ndị na-asọmpi ha n'ịntanetị na-eji vidiyo.
Companylọ ọrụ a nwere akara siri ike nke tụkwasịrị obi na ntanetị ma obi abụọ adịghị ya na mmepụta vidiyo ga-eme ka okporo ụzọ ndị ọzọ na-aga n'ihu, ọtụtụ okporo ụzọ ọchụchọ na - n'ikpeazụ - nyere ha aka ịkọwawanye uru nke ịdenye ọrụ ha na atụmanya ha.
Vidio na-aghọwanye ewu ewu na ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ. Mgbe ego ga - eme, onye ọ bụla na - anwa iwere nke ahịa vidiyo flavored achịcha. Ọbụna ụfọdụ na-anwa ime nke ha.
Ebe nrụọrụ weebụ nwere usoro ịzụ ahịa vidiyo vidiyo dị mma mụbaa ohere ha nwere ịbụ ndị a họọrọ na peeji mbụ nke nsonaazụ Google site na ihe ruru ugboro 53.
Ndepụta vidiyo nke gosipụtara na ọchụchọ ahụ na-enweta ihe dịka Pasent 41 elu-pịa udu karịa ndị asọmpi ha.
Tags: nzubepịa-site ọnụegoctrNwokevidiyo ctrahịa vidiyovideo ahịa infographicvideo ahịa seovidiyo vidiyo statsvidiyo serp
Nchọpụta - Iwu Ọhụrụ 21 nke Ahịa Ọdịnaya
Ọkt 17, 2013 na 8:38 PM
Maka akụkụ m ma a bịa na Google Analytics, peeji ọdịda na obere vidiyo na-atọ ụtọ! Dika o gosiputara na o nwere onu ahia di ala nke di nma kari ya na ibe ozo nke nwere ogologo ederede.